Tarjumaadaha Gajos ee Geosmoke - Geofumadas
Turjumaadda Geosmoke Geosmoke
Maarso, 2009 egeomates My
Gacaliye, waxaan ku guulaystay inaan helo qof ka tarjumaya Geofumadas oo ah meel loo qoondeeyay sida hadda oo kale Geosmoke, tani waa qaybta Ingiriisiga ah ee meeshan. Waan helay oo waan sii wadi doonaa helitaanka soo-jeedin xiiso leh, samada ilaa cadaadiska qiimaha inkastoo go'aanka aan qaatay oo kaliya qiimaha boostada laakiin farsamada farsamada ee faa'iido weyn leh.
Iyada oo turjumaan rasmiga ah ee rasmiga ah, hadda waxaan ku faraxsanahay qiimaha aad i siisay boostada, noqotana dheer o monosyllabic in ka badan xNUMX iyo 500 oo bishiiba ka baxa habeenkii hotelka ee cidla ah. Mid ka mid ah mid ka mid ah dhinacyada xiiso leh of my turjumaan jecel waxaa loogu tala galay si aad u hesho macnaha hooyo waxa aan loogu tala galay in aan caliche Central, oo lagu daray dar ah erayada aan la xidhiidhin mararka qaarkood furo, more hallucinate nin jeclaysi in la akhristayaasha my iyo qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda oo ah masaafada u dhexeysa guji.
Goosano waxa bixiso ... fudud, waxaan doonayaa in aan uga sooco, si ay u malaynayaa in aan turjumo karaa Ingiriisi si Isbaanish si nabad ah laakiin qumbaha ii jebin waxa cad waa in ay fahmaan ... kuma mahdiyaan. Si aad uhesho qof samayn kara, si uu u raaco xawaaraha aan waalidku ku soo dhejiyo iyo inuu leeyahay kalgacal aad u xoog badan oo aadanaha ah marka aynu ku hadlno, waxa ka sii wanaagsan.
Waayo-aragnimadu waxay ka badan tahay barashada farsamada, in gabadhani ay ku adkaato wadatashi aad u wanaagsan oo si joogta ah loola hadlo weedhahayga Spanish-ka ah, tusaale ahaan, markaan idhaahdo in gabadhaydu "ay cunayso ciddiyaha" aysan dhihin "cunid ciddiyaha" ama " Dhamaan ciddiyaha "laakiin waxa ay ku sii adkeyneysaa xaalad walaac ay suurtogal tahay in ay soo saarto sawirada ay jeceshahay. Kiis kale ayaa ah in la gooyo xididdada "jarista xididdada" si cad oo weedha ah oo sheegay in macalinkii hore (oo mararka qaar seegay) uu ka dhacay Cantabria markii ay xaaladdu ahayd mid muhiim ah, "ka saar koofiyadaada", " "Xaalado badan waxaa lagama maarmaan ah in la dhigo sharraxaad ka timid ilo Hispanic ah sidaa darteed waxaa lagu gaarey" sida ugu fiican ee aad karti "... ka xumahay cheles.
Taasi ma aha in la dhaho ereyada leh jawi kooban oo yaryar sida "lakab", "furular", "burbur", "piruetas" ... Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto erayo adag oo laga faafreeb Muuqaalka Google sida m: 3rda, co * o, ca6rón iyo kuwo kale oo ku xiran dhiirigelinta iyo bay'ada waxay noqon kartaa mid weerar ama raaxo leh.
Oh, waan iloobey, gabadhu waxay joogtaa Koonfurta Ameerika, oo waxay si fiican u soo gashay shaqo fiican; Haddii shaqadu tahay mid aad u wanaagsan ... waxaan ku sameyn karnaa dhiirrigelinta barta si aad ula xiriirto.
Post Previous«Previous Sida loo qaabeeyo sawir
Post Next gvSIG sida badiil ah degmooyinkaNext »